Xog-Waran:Xudunta khilaafka Jabuuti iyo Soomaaliya. – Xeernews24
Xog-Waran:Xudunta khilaafka Jabuuti iyo Soomaaliya.
3. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Dhinaca Soomaaliya oo aan mas’uuliyiinteeda la xidhiidhnay, kama aysan hadlin.
Caalin ayaase u arka khilaafka u dhaxeeya Eritrea iyo jabuuti inuu yahay mid ku qotoma juqraafi ahaan meesha ay ku yaallaan iyo dhulka ay ku loollamayaan, oo Soomaaliya aysan xuduud ku lahayn, danaheeda istaraatijiyadeedna aysan ku xidhnayn.
“Cunaqabataynta saaran Eritrea waxay Jabuuti u suurtogalisay in dekedo badan ay dhisato, ayadoo kuwa Eritrea looga cararay cunaqabataynta saaran iyo sawirka laga bixiyey oo aan qurxoonayn daraadood. Sidoo kale, joogitaanka ajaanibta ka fogaanaya inay Eritrea tagaan waxay ay Jabuuti ka heshaa dhaqaale badan, sidaa darteed, cunaqabataynta oo laga qaado Jabuuti waxay loollan adag gelinaysaa maqaamkeeda gobolka, waxayna soo nooleynaysaa Eritrea oo haddeerba cilaaqaad aad u fiican la soo ceshatay Itoobiya” ayuu yidhi Caalin.
Saamaynta isbeddelkaas uu ku yeeshay xidhiidhka Soomaaliya iyo Jabuuti maxaa lagu sheegi karaa? Mar kale Maxamed Nuur Caalin.
“Isbeddelka hadda socda waxaa loogu yeedhaa isbeddelkii qowmiyadaha. Jabuuti waxay ka mid tahay dalalka uu isbeddelkaas saamaynayo, waayo qowmiyadaha aan ka hadlayno waa Soomaalida, Canfarta, Tigreega, Amxaarada iyo Orommada. Tusaale ahaan, dhinaca Canfarta oo kale, waxay maslaxadooda u arkaan in la isku furo dhulkooda, ilaa iyo Casab iyo Musawac” ayuu yidhi Caalin.
Wuxuu tilmaamay in taasi ay timid bacdamaa deegaannada dekedaha ay dhistay Jabuuti ay ku yaallaan dhinaca xudduudda Soomaaliya, sidaa darteedna ay canfartu dareemayaan in si loo yara gacan bidixeeyey.
“Cunaqabataynta Eritrea waa laga qaadayaa, waayo waxaa u ololaynaya dalal waaweyn sida Itoobiya, Maraykanka, Israa’iil, Iimaaraadka iyo dalalka dhibaatada ku qaba dhallinyarada Eritrea ee dalkooda ka cararaya. Dhinaca kalena, dadaalka Eritrea ay u gashay in cunaqabataynta laga qaado waxaa keenay dekedaha waaweyn ee Jabuuti oo lagu wareejiyey Shiinaha, maraykanka iyo Shiinahana loollan adag ayaa Afrika ku dhex maraya” ayuu yidhi Caalin.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/04/Xog-waran.png 138 364 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-03 07:47:092018-08-03 07:47:41Xog-Waran:Xudunta khilaafka Jabuuti iyo Soomaaliya.
Maxkamadda London oo go’aan ka gaadhay kiiskii Jabuuti iyo DP World. MAQAAL XIISO LEH: MADAXWAYNAHA JABUUTI WAA INUU FAHMAA DANTA SOOMAALIYA INAY...